Gudoomiye Dhoobo oo hada ku dhawaaqay war culus & Xaruntii Baarlamaanka Puntland oo uu sheegay in ay…. — CAASIMADA
Home WARARKA MANTA Gudoomiye Dhoobo oo hada ku dhawaaqay war culus & Xaruntii Baarlamaanka Puntland...
Gudoomiye Dhoobo oo hada ku dhawaaqay war culus & Xaruntii Baarlamaanka Puntland oo uu sheegay in ay….
Garowe (Caasimadatimes)-Gudoomiyaha Baarlamaanka Puntland C/xakiin Maxamed Axmed Dhoobo Daareed oo goor dhoweyd hadlay ayaa sheegay in xarunta Baarlamaanka Puntland ay la wareegeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda, kuwaas oo uu hogaaminayey Muxuyadiin Gacamay oo ah taliyaha ciidamada Booliska Puntland waa sida uu sheegaye.
Mr. Dhoobo oo ku dheeraaday arimaha haatan ka jira Puntland ayaa sheegay in madaxweyne Denni uu wado abaabul xoogan oo ku aadan sidii uu mooshin uga keeni lahaa isla markaasna uu qorshaynayo sidii uu ku ridi lahaa.
Waxa uu sheegay in ay lama huraan tahay in laga wada shaqeeyo jiritaanka Puntland hasa yeeshee waxa uu xusay in dhibaato iyo caqabado xoogan uu wado madaxweyne Denni.
Qaar kamid ah ciidamadii dadkii caawa lagu dilay dagaalkii dhacay xarunta Baarlamaanka Puntland ayuu sheegay in ay kamid ahaayeen ilaaladii xarunta Baarlamaanka Puntland ee Garowe oo uu sheegay in lagu laayey si xaq daro ah, waxaana uu dhanka kale ka jawaabay hadal kasoo baxay taliye kamid ah taliyaashii caawa fuliyey weerarkii Baarlamaanka oo sheegay in lagu dilay xarunta gollaha wakiiladda Puntland malayshiyaad hubaysan oo uu Dhoobo dhankiisa ka sheegay in ay ahaayeen ciidamo ilaalinayey xarunta Baarlamaanka oo awood lagula wareegay.
La wareegista Hoolka Baarlamaanka ayuu ku sheegay in ay faa’iido u aragto xukuumadda madaxweyne Denni, waxaana uu shaaca ka qaaday in ay wado xukuumadda shakhsiyaad kale oo ay damacsan tahay in ay gacanta u galiso masiirka Puntland.
Mr. Dhoobo ayaan weli cadeyn mowqifkiisa ku aadan xukuumadda, waxaana socda mooshin ka dhan ah oo ay wado madaxtooyadu kaas oo xildhibaanada taabacsan lagu siinayo hirgalintiisa lacago badan si looga takhaluso Dhoobo.
Maalinta bari ah ayaa la filayaa in kulan ay yeeshaan xildhibaanada Baarlamaanka Puntland, kuwaas oo la asteeyey in ay ridaan gudoomiye Dhoobo Daareed.
44 xildhibaan ayaa madaxtooyada u diyaarsan si ay u hirgaliso qorshaha ay kaga takhalusayso gudoomiye Dhoobo oo dhankiisa sheegay in xad gudub lagu samayn doono sharciga caalamiga ah iyo dastuurka Puntland intaba.
Previous articleDEG DEG: Garowe oo caawa ololaysaa dagaalka ka socda Xarunta baarlamanka Puntland & Weerarka lagu qaaday.
Next articleBaarlamaanka Puntland oo fadhi deg deg ah loogu yeeray saaka & Gudoomiyahooda oo ay xilka ka qaadayaan. Xaaldo xasaasiya oo ka socda Garowe
DEGDEG:Qarax khasaare kala duwan geeysaty oo ka dhacay Muqdisho.
Wararkii Wararkii ugu dambeeyey Korneyl Caare iyo SOMALILAND hashiisyo hoose Oo..ugu...